Loharano, Vatsy Tsinjo, Tsena mora… Tsy araka ny nilazana azy tambony latabatra
Tsy ilaozan’izay tia kely, araka ny nambaran’ireo tompon'andraiki-panjakana tokoa ny fiarahamonina malagasy miatrika izao zava-misy izao, raha ny fitarainan’ireo eny ifotony.
Tsy araka ny nilazana azy tambony latabatra ny fitantanan’ireo mpanatanteraka baiko ireo rafitra sy hetsika neverina ho fitsinjovana ny vahoaka malagasy ao anatin’izao fotoana tokony hihibohan’izy ireo izao. Ny firafitry ny Loharano, izay rafitra ifotony natao hitantana ny fitsinjarana ireo fanampiana fotsiny dia efa maha be tsikera ireo mpiara-monina, raha ny zava-misy amin’ireo fokontany hatreto. Samy nieritreritra ny rehetra ho aterina isan-tokantrano ny Vatsy Tsinjon’izy ireo kanefa dia mbola misy mponina mitaraina ho tsy nisitraka izany ihany hatramin’izao. Laniana fahefatr’adiny amin’ny fanadihadiana ireo vahoaka efa sahirana, hoy ny mpilahatra iray tetsy Avaradoha, ny alarobia teo. Ny sasany amin’ny 7 ora maraina no milahatra. Amin’ny 4 ora hariva vao afaka. Kiviana amin’ny filaharana ve izany ireo sahirana dia mody rehefa tsy maharitra mba ho lasan’ny mpizara ny anjaran’izy ireo avy eo? Na tsena mora na fanampiana hafa moa izany izao dia mbola tsy mety voahaja hatrany ny elanelana iray metatra eo amin’ireo milahatra azy ireny.